Mercedes-Benz C200 2011 (#716315) ကို Thingangyun ၿမိဳ့နယ... | CarsDB
10072 total views, 17 today
Lot Number: #716315
အရည်သွေးမြင့် ကားတစ််စီးရဲ့ Performance ကတော့ မောင်းနှင်သူရော လိုက်ပါစီးနင်းသူများအတွက်ပါ အသေးစိတ် တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ် ၊ ဂျာမနီထုတ်ကားတွေထဲမှာ နာမည်ကြီးအမျိုးစားဖြစ်တဲ့ Mercedes-Benz C-Class လေးတစ်စီး ရောင်းရန်ရှိပါတယ် C 200 2011 မော်ဒယ်လေးဖြစ်ပြီး 1800 CC (7 Speed Sport Transmission) Steering Paddle Shifter, Cruise Control, Sport Seat များဖြင့် တကယ့်ကို Sport Type ဆန်ဆန် မောင်းနှင်နိုင်မည့် ကားအမျိုးစားပါ ၊ ပါဝင်တဲ့ Featured များအနေဖြင့် -
-LEATHER - BLACK/ANTHRACITE
-SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
-LEFT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
-AIRBAGLABLE , SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT ,KNEE AIRBAG
-AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)
-PRODUCT PROT. F FREIGHT PACKAG. W TIE-DOWN HOOKS
-RADIO REMOTE CONTROL W/O PANIC SWITCH (315 MHZ)
-DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
-ENGINE REDUCED PERFORMANCE
-DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN တို့အပြင် အခြားနည်းပညာမြင့်စနစ်များစွာပါဝင်တဲ့ ကားလေးကို လာရောက်ကြည့်ရှု့၍ စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမလား ချေးငွေဖြင့် အရစ်ကျဝယ်ယူမလား အသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Hein Wunna Hlaing မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Mercedes-Benz C200 2011 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။